ရေခြားမြေခြား မြန်မာများ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 22
San Francisco Burmese Community Book Drive ကလေးစာအုပ်များ ဆက်လှူဒါန်း၊ ရပ်ကွက်တွင်း စာကြည့်ခန်းငယ်များအတွက်ပါရည်ရွယ် မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂၊ မတ် ၁၅၊ ၂၀၁၂ မြန်မာပြည်တွင်းရှိ ကလေးသူငယ်များအတွက် San Francisco Burmese Community – Book Drive က ကလေးစာအုပ်များ စုဆောင်းပြီး ပေးပို့လှူဒါန်းသည့် လှုပ်ရှားမှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်လျက်ရှိရာ ယခင်လက စာအုပ်သေတ္တာများ အသုတ် ၃ သုတ်ခန့် စုဆောင်း ပေးပို့ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ရှေ့လာမည့် လအတွင်း အဆိုပါစာအုပ်များ ရန်ကုန်သို့ ရောက်ရှိပါက အဝေးနယ်များရှိ ကလေးကျောင်းအချို့ထံ ပေးပို့မည်ဟု ဆိုသည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင်း mini library ခေါ် အိမ်တွင်းစာကြည့်တိုက် (စာကြည့်ခန်း) ဖွင့်ထားသည့်...
ဟိန်းထိုက်ဈာန် (ခ) ကျော်ကျော်အောင် မတ် ၁၀၊ ၂၀၁၂ မြန်မာပြည်သားများ စုဝေးတတ်သော ပင်နီဆူလား ပလာဇာရှေ့မှ မြင်ကွင်းတခု (ဓာတ်ပုံ – မိုးမခ) ၁. ကျွန်တော်သည် စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကရောက်ရှိပြီး S Pass ဖြင့် ယခုအချိန် (၁၀.၃.၂၀၁၂) ထိ အလုပ် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
ဥက္ကလံမြို့၊ ဓမ္မအေးရိပ်ကျောင်း သံဃိကဒါနမဟာဒုဂ် စာရေးတံမဲအလှူရှင်များ ဖိတ်ကြားလွှာ အရှင်အရိယာစာရ၊ မတ် ၇၊ ၂၀၁၂ (မိုးမခရွာဆော်ကြီးက ထပ်ဆင့်တင်ဆက်ပါတယ်) • တိသရဏ ငါးသီလ မဲချစာရေးတံ။ • ဆယ့်ငါးရက်ဆွမ်း ၀ါသင်္ကန်း လှူဒါန်းသောက်ရေကန်။ • ကျောင်းလှူတစ်ဝ နိဗဒ္ဒ ပုညရှိသူအမှန် ။ • သောတာလိုပဲ ဂတိမြဲ သူလည်းအပါယ်မပြန်။ အကျိုးများလှ၍ အပါယ်မကျ ဂတိမြဲလှ စူဠသောတာပန် အဆင့်ရှိသော ဒါနစာရင်းတွင် သလာကဘတ္တ ခေါ်စာရေးတံမဲအလှူဒါနသည်အပါအ၀င်ဖြစ်သောကြောင့် သာသနာ အဆက်ဆက် ခေတ်အဆက်ဆက်ကျင်းပလာခဲ့ကြပါ သည်။ ထိုအစဉ်လာအတိုင်းပင် ဥက္ကလံမြို့၊ ဓမ္မအေးရိပ်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တပည့်ဒါယိကာ၊ဒါယိကာမများ ဦးဆောင်၍ ပထမအကြိမ် မဟာဒုဂ် စာရေးတံမဲပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ဗေးဧရိယာအတွင်း မှီတင်း နေထိုင်ကြပါကုန်သော သဒ္ဓါကြည်လင်...
ကာတွန်း ATH ရဲ့ စိုက်ကြပြန်ပြီ … https://t.co/GznGEXVq9E https://t.co/rwlN10uJ3c about 1 hour ago ReplyRetweetFavorite
ဇင်လင်း ● မစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများ (သို့မဟုတ်) အငြင်းပွားဖွယ် တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြဿနာ… https://t.co/cpitDHmpPE about 1 hour ago ReplyRetweetFavorite
နေချိုသွေး ● ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး https://t.co/Qpakx9rY4W about2hours ago ReplyRetweetFavorite
Myanmar NOW – ဟာဂျီယာစင်၏ ဘဏ်အပ်ငွေအကြောင်း တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း https://t.co/z9YuQCBFtS https://t.co/bzV5DbWNro about 12 hours ago ReplyRetweetFavorite
မောင်ရစ် – ၈၈ အနှစ် ၃၀ မှသည် အတိတ်စိတ္တဇအလွန်ဆီသို့ https://t.co/AKWdiqBURs https://t.co/uGvBjHh1At about 16 hours ago ReplyRetweetFavorite